Thunderbird 91 inosvika ine inovandudza maseru uye zvimwe zvakawanda | Linux Vakapindwa muropa
Saka uye mafambiro atinoita pasvondo Vhiki rapfuura, hombe kuvandudza kuMozilla email mutengi yaifanirwa kusvika svondo rino. Ichi Chipiri, iyo kambani yakaparura Firefox 91, uye iyo firebird ichave zvakare Thunderbird 91. Iko kusvetuka kwenhamba hakuiti nekuda kwekukosha kwezvinhu zvitsva, kunyange zviri zvakawanda uye zvinonakidza.
Thunderbird 91 ikozvino inobvumidza kupinza / kutumira kunze ma profiles, asi chii chingave chinotonyanya kushamisa, nekuti chinopinda kuburikidza nemaziso, ndizvozvo vakavandudza chimiro Ye mushandisi. Pasina kupokana, vamwe havazofarire aya ma tweaks, nenzira imwecheteyo yavakaita pavakagadzirwa muFirefox. Pazasi iwe une runyorwa nenhau dzakakurumbira idzo vhezheni iyi yaunza.
Pfungwa dzeThunderbird 91
Kugadziridzwa kwemushandisi interface inoenda kubva pachiratidziro chekugashira, kuburikidza nekarenda uye kuperera mune yekunyora hwindo uye meseji munyori. Ivo zvakare vakagadziridza iyo yekudhinda skrini.
New account setup wizard.
Kugona kupinza / kutumira kunze Thunderbird profiles.
Yakarongedzwa kutsiva yekumisa kana kusaenderana zvinowedzerwa.
Yakagadziriswa erima modhi ekuonekwa nyaya uye akakwirira musiyano madingindira.
Beta level rutsigiro rweMatrix maseva (chat chinhu).
CardDAV kero bhuku rekutsigira.
Kugonesa redirection yemeseji.
Mamwe mashoko arimo kusunungura chinyorwa.
Thunderbird 91 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva yayo yepamutemo webhusaiti. Sezvakaita nebrowser, vashandisi veLinux vachatora mabhinari kubva ipapo, asi isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kune akasiyana akasiyana ekuwedzera mapakeji nyowani sekuvandudzwa. Flathub uye Snapcraft vachasvika mumaawa mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Thunderbird 91 inosvika pamwe nekuvandudzwa muiyo interface, mukarenda, encryption uye zvimwe zvakawanda